Soo dhawow, Guest
Forgot your password? Forgot your password? Create an account
Forums Flight lagtiisa
FSX - FSX Fasalka Buugga
Xakameynta tuurista tuutaha X
Xakameynta tuurista tuutaha X 7 bilood 1 toddobaad ka hor #1558
Ku mahadsan tahay in aad heshay: 1
Markaan riix batoonka IAS ee ku yaal cajaladda 'Citation X' ee i soo dejisa halkan, badhanka ma shidmayo mana istcimaalayo isteerinka inuu xawaare ku xareeyo. sidoo kale kuma xakameyn karo VS taayirka ama sidoo kale. fahamkayga faallooyinka waxaad u adeegsan kartaa sanka korkiisa / sanka hoose giraangiraha midig ee ku xiga AP / ALT / IAS / FLC iwm. badhamada si aad u dejiso IAS iyo VS haddii aad riixdo batoonnada saxda ah laakiin badhanka IAS ma shaqeeyo.
sidoo kale waxaa jira badhanka Autospoiler oo u muuqda inuu shaqeynayo, ugu yaraan wuxuu shaashadda ka sheegayaa in Autospoiler hubeysan laakiin badhanka uusan iftiimin. oo waxaa jira badhannada autobrake-ka laakiin midkoodna ma shido iftiinka, ma ogi inay si buuxda u shaqeeyaan.
Xal kasta ha noqotee?
Waan ogahay inaad iskudaysiin karto mashiinka xakamaynta autopilot oo aad adeegsan karto laakiin way fiicnaan laheyd haddii badhamada isbeega ee 3D ay sidoo kale shaqeyn laheyd.
Waxyaabaha kale ee aan ahayn 'Citation X' runtii waa mid qabow oo tayo leh addon, mid ka mid ah moodooyinka bilaashka ah ee ugu fiican ee jira.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Teteu2044
Xakameynta tuurista tuutaha X Bilood 5 4 maalmood ka hor #1625
Ku mahadsan tahay in aad heshay: 0
Su’aal xiiso leh Anigu iskuma dayin Citation X halkaan laakiin waxaan ka aqaanaa Xaqiijinta Nolosha dhabta ah, Waan ogahay in midkoodna uusan lahayn gaari-tuutaha baabuurta, wadayaasha gawaarida ama bareega gaariga. Malaha taasi waa sababta badhannada aysan ugu shaqeynaynin qalabkan. Waa suurta gal in la helo CITX wax laga beddelay nolosha dhabta ah ee wanaagsani laakiin ma u maleynaayo inay yihiin warshad lagu rakibay afaik.
Haddii ay taasi kaa horjoogsato inaad ka raaxaysato diyaaradda, waad ka nuqul kartaa cabirrada loo baahan yahay oo ka socda guddi kale oo diyaaradeed oo aad u habayn kartaa midka jira. Laakiin taasi waa shaqo badan.
Board Categories About Rikoooo - Soo dhawow Xubnaha Cusub - Sanduuqa soo jeedinta - War-bixin Forums Flight lagtiisa - FSX - FSX Fasalka Buugga - FS2004 - Prepar3D - X-Plane warbaahinta - Screenshots - Fiidiyowyada katabaan hadal - Fly Tunes - Maxaad iyo meesha aad u duulaysay maanta? - Duullimaadka dhabta ah lagtiisa oo kale horyaalka - Diyaaradda duulimaadka diyaaradda - - Ku saabsan Duulimaad Duulimaad - Qalabka DCS - SIMON BARNAAMIJKA SIMS
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.176